नगरकोटको दोहोरो कर हटाउन माग गर्दै नपामा ज्ञापन – indepth.com.np
नगरकोटको दोहोरो कर हटाउन माग गर्दै नपामा ज्ञापन
१५ कार्तिक २०७५, बिहीबार २०:१८
चाँगुनारायण नपाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामा । तस्बिर : ईश्वरकाजी खाइजू
भक्तपुर । नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीहरुले करको नाउँमा नगरपालिकाहरुको लुटतन्त्र बढेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । भक्तपुर र काभ्रपलाञ्चोक जिल्लाको सीमामा पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यस्थल नगरकोट पुग्ने विदेशी पर्यटकहरुसँग दुवै जिल्लाका नपाले कर उठाउन थालेपछि उनीहरु आक्रोशित भएका हुन् ।
नगरकोटको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कुनै योगदान नगरी उल्टै करमात्रै लगाएर नगरपालिकाहरुले लुट मच्चाएको उनीहरुले आरोप लगाए ।
उनीहरु भन्छन्, ‘नगरकोट पुग्ने बाटोसमेत गतिलो छैन । बसपार्कको व्यवस्था हुन सकेको छैन । पदयात्रा जाने व्यवस्थित मार्ग छैन । न शौचालय छ न त खानेपानीको व्यवस्था ? कुनै सेवा नभएको ठाउँमा पनि सेवा शुल्क हुन्छ ? यो त कर होइन, लुट हो ।’
भक्तपुरको चाँगुनारायण र काभ्रेको मन्डन देउपुर नगरपालिकाले दुई सय मिटरको फरकमा नगरकोट पुग्ने विदेशी पर्यटकहरुसँग सेवा शुल्क उठाउँदै आएको छ । दुवै नपाले विदेशी पर्यटकहरुलाई समान कर तोकेको छ । जसअनुसार दक्षिण एसियाका नागरिकले प्रतिव्यक्ति दुई सय र तेस्रो मुलुकका नागरिकले तीन सय रुपैयाँ शुल्क तिरेपछि मात्रै नगरकोट भ्रमण गर्न पाउँछन् । उक्त शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट पनि पर्यटकले नै तिनुपर्छ ।
सडकको दुरावस्था उस्तै
नगरपालिकाहरुले पर्यटकहरुले नगरकोट पुग्दा प्रयोग गरेको सडक र पदयात्राको शुल्क उठाएको दावी गर्दै आएको छ तर भक्तपुरबाट नगरकोट पुग्ने बाटो अझै बन्न सकेको छैन । तीन वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने उक्त सडक अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
बाटो विस्तारको लागि दुवैतिर खनेर छोडिएको सडकमा जताततै खाल्डाखुल्डी छन् । जसले गर्दा घाम लागे धूलो र पानी परे हिलाम्मे भएर उक्त बाटोबाट नगरकोट पुग्न कठिन हुने पर्यटन व्यवसायीहरु गुनासो गर्छन् ।
त्यस्तै भक्तपुर कमलविनायकबाट भत्क्यापाटी, सुडाल, कलमसी हुँदै नगरकोट पुग्ने अर्को सडकको अवस्था पनि फरक छैन ।
‘चाँगुनारायण नगरपालिका भएर नगरकोट पुग्ने दुइटै बाटो गतिलो छैन’, नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष इन्द्र लामाले भने, ‘यस्तो खराब बाटो प्रयोग गरेको पनि कहीं कर हुन्छ ? नगरकोटमै पर्यटक लक्षित कुनै सेवा सुविधा छैन ।’
उल्टै एउटा नगरपालिकामा कर तिरेको दुई मिनेट हुँदैन अर्को नगरपालिकालाई कर तिर्न ठिक्कमात्रै भएको उनको गुनासो थियो ।
धमाधम बुकिङ रद्द
पर्यटकहरुलाई दोहोरो करको बोझ भएपछि नगरकोट पुग्ने पर्यटकहरुले धमाधम बुकिङ रद्द गर्न थालेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार नगरकोट आउने पर्यटकहरु अन्यत्रै ‘डाइभर्ट’ हुन थालेका छन् ।
‘नगरकोटमा दोहोरो कर थोपरिएपछि यहाँ पुग्ने पर्यटकहरुले धमाधम बुकिङ रद्द गरेका छन्’, नगरकोटका पर्यटन व्यवसायी गणेश लामिछानेले भने, ‘नगरकोट आउने धेरैजसो पर्यटकहरु अन्यत्रै डाइभर्ट हुन थालेका छन् ।’
झुक्किएर नगरकोट पुगेका पर्यटकहरुले समेत होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुलाई गाली गर्ने अवस्था आएको उनी सुनाउँछन् ।
‘पर्यटकहरुले समेत नगरकोटमा के छ पैसा तिर्नुपर्ने ? भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्’, उनी थप्छन्, ‘नगरकोट आउनु पैसाको बर्बादी हो भन्न थालिसकेका छन् ।’
एकै ठाउँमा दुईतिर कर उठाएको देखेर पर्यटकहरुले नेपालमै दुइटा सरकार छ कि के हो भनी प्रश्न गर्न थालेको उनको भनाइ थियो ।
पर्यटक ५० प्रतिशतले घट्यो
व्यवसायीहरुका अनुसार नगरकोट पुग्ने पर्यटकहरुको संख्या आधाले घटेको छ । जसले गर्दा नगरकोटको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दै आएको उनीहरुको दावी छ ।
‘सडकको दुरावस्था र दोहोरो करले हिजोको स्वर्ग नगरकोट अहिले नर्क बन्नेतर्फ अग्रसर छ’, अर्का होटल व्यवसायी रामशंकर ध्वोजूले भने, ‘दोहोरो कर थपिएपछि नगरकोट पुग्ने पर्यटकहरु आधाले घटेका छन् ।’
दोहोरो करले अहिलेको पर्यटकीय सिजनमै पनि नगरकोटका होटलहरुलाई पर्यटक पाउन मुस्किल हुँदै आएको उनी बताउँछन् ।
यसले ठूला होटललाई भन्दा साना होटलहरुलाई मारमा पारेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
कर हटाउन नपालाई ज्ञापन
यसैबीच नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिले पर्यटकहरुमाथि लगाइएको कर हटाउन माग गर्दै नगरपालिकाहरुमा बिहीबार ज्ञापन बुझाएको छ । समितिले काभ्रेको मन्डन देउपुर र भक्तपुरको चाँगुनारायण नपामा कर लिने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा अहिले लिइरहेको प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष कर लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै नगरकोटबाट उठाइएको कर त्यहाँकै भौतिक पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नसमेत जोड दिइएको छ ।
समितिको माग सम्बन्धमा मन्डन देउपुर नपा सकारात्मक रहेको समितिका सचिव धनबहादुर तामाङले जानकारी दिए । तर चाँगुनारायण नपाले अस्पष्ट जवाफ दिएको उनी बताउँछन् ।
चाँगुनारायण नपाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले ज्ञापनपत्र बुझ्दै उक्त माग सम्बन्धमा नपाको बैठकमा छलफल गर्नेमात्रै बताएका थिए ।
आफूहरुको माग सम्बन्धमा प्रमुख मिश्रबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि उनीहरुले मेयरसँग पटकपटक माग सम्बोधन गर्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । पर्यटन व्यवसायीहरुले आफ्नो माग सम्बन्धमा प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दा पनि मेयर मिश्र जवाफविहीन भएर बसिरहेका थिए । व्यवसायीहरुले नेकपाका उम्मेदवारहरुबाट केही हुन्छ भन्ने आशले सोमप्रसाद मिश्रलाई नै भोट दिएको तर अहिले सुविधाभन्दा उल्टै करको बोझ थपिएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
उनीहरुले चुनावताका नगरकोटमा गर्ने भनिएको विकास निर्माणका कामसमेत निर्वाचित मेयर मिश्रले नगरेको गुनासो गरे । त्यस्तै गत वर्ष कर उठाउन सुरु गरेकै दिन ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि मेयर मिश्रले गरेको बाचाअनुसार नगरकोटमा बसपार्क र पर्यटक शौचालय वर्षदिन हुँदा पनि नबनाएको आरोप लगाए ।
भक्तपुरमा पाँचदिने इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पो हुने
भक्तपुरको विद्युत चुहावटमा अचम्मका बेथिति